Korea: Ireo Orinasa Mpampindram-bola sy ny Dokambarotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2018 12:46 GMT
Fotoana vitsy lasa izay, nanomboka nivoaka tamin'ny fahitalavitra, gazetiboky, ary gazety tao Korea ireo dokambarotra ho an'ireo orinasa mpampindram-bola ho an'olontsotra. Nampiseho ny tarehiny tamin'ireny dokambarotra ireny ireo mpanakanto malaza. Nila fotoana maromaro vao fantatrin'ny olona hoe karazana dokambarotra inona ireny, kanefa anisan'ireo mahazatra izy ireny amin'izao fotoana izao.
Vao haingana izay, notsikerain'ny vahoaka ny fanapahankevitr'ireo olo-malaza ny hanohana ireo orinasa mpampindram-bola ho an'olontsotra satria bankirompitra ireo mpindram-bola sasany noho ny tsy nahavitan'izy ireo nandoa ny zanabola ambony be, ny sasany amin'izy ireo aza mampiasa ny vola kanefa tsy mahalala tsara akory ilay orinasa. Voatsikera ireo mpanohana satria nanome fitokisana ireo orinasa ary, noho izany, lasa tsy maintsy nandray fanapahankevitra ratsy ireo vahoaka.
Mba hitazonana ny lazan'izy ireo, nangataka ny hanajanonana ireo dokambarotra sy hamerenana ny tombombarotra ireo olomalaza mpanohana sasany. Ny sasany niala tsiny noho ilay fanapahankevitra tsy ampiheverana ny hipoitra tamin'ireny karazana dokambarotra ireny. Mifanohitra amin'izany kosa, vao haingana kely, nipoitra tamina dokambarotra orinasa mpampindram-bola ho an'olontsotra ny iray tamin'ireo mpanakanto, narahin'ny vadiny. Nilaza izy fa tsy hanajanona ireo dokambarotra ary tsy menatra tamin'ny fanapahankevitra noraisiny.
Nahatezitra blaogera maro ny fitondratenany.
Ireo olo-malaza nahatoky indrindra sy maha-te ho tia indrindra no mipoitra amin'ireo dokambarotra orinasa mpampindram-bola ho an'olontsotra. Manampatra ny lazany anefa izy ireo amin'ny fanohanana ireo findramana tsy misy antoka, tsy misy zanany, azo ao anatin'ny antsasak'adiny… haingana sady tsotra toy ny miantsena… namoaka izany vava izany izy ireo. Noheverina ho lehilahy ratsy saina, namitaka ny fitiavan'ireo mpankafy azy i Kim (solon'anarana) ary nisafidy ny vola toa izay ny tokiny sy ny zavatra andrasan'ny mpankafy taminy. Afaka miteny izy hoe tsy dokambarotra tsy manara-dalàna io. Kanefa tokony ho fantany ny rivotra iainana ao amin'ilay orinasa amin'izao. Tsy mitovy mihitsy ny zava-misy sy ny dokambarotra. Toa voatantana ara-dalàna ireo orinasa mpampindram-bola, kanefa izy ireo dia amboadia milaza tena ho zanak'ondry
Fampanjanaham-bola tsy ara-dalàna, trosa manokana… manana laza ratsy izy ireo, ary misy tranga maromaro nahatonga ireo vahoaka hiharam-boina. Raha fantany hoe ahoana ny fiantraikany ratsy amin'ny toekarena ary raha niharam-boina izy, dia mety tsy ho niteny an'izany izy. Nihevitra izy fa olan'ny hafa izany. Nisafidy ny vola izy ary nilaza hoe “tsy te-hiala tsiny amin'izany aho”. Midika ho tsy firaharahiana ireo mpankafy azy io teniny io. Izao no teniny tamin'ilay fanadihadiana: tsy miraharaha izay mety ho kiana izy. Mazava… izay no teniny, ho adino ao anaty saina izany afaka elaela. Andao anie fa ho hita eo. Mivarotra ny lazany ho an'ny vola ireo artista. Tsy ho am-potsika intsony izy ireo.
Tsy ny blaogera rehatra no nitovy hevitra taminy.
Maninona no manahirana ilay dokambarotra? Tsy hampindram-bola ho an'ny ankizy ireo mpampindrana. Azoko ilay hoe olon-dehibe no ampindraminy, izay afaka mandray andraikitra ara-dalàna am-pahaleovantena.
Ilay lalàna misahana ny tahan'ny zanabola ho 66 isanjato amin'ny findramam-bola ary ny fandehanan'ilay dokambarotranà orinasa mpampindram-bola ho an'olontsotra tao amin'ny fahitalavitra natao ho an'ny ankizy no tena olana fototra. Mitroka ny ràn'ny vahoaka ve ireo dokam-barotra ireo? Tsy mampindrm-bola fahatany izy ireo. Amin'ireo olona afaka mamerim-bola izy ireo no mampindram-bola. Olon-dehibe ianao. Sahirana ny media mitatatata momba ny zanabola 66 isanjato isan-taona. Tsy sarotra ny mahatakatra hoe ambony be izany raha toa ka olon-dehibe mahaleo tena. Olondehibe afaka mitsara sy mitondra tena tsy miankina na amin'iza na amin'iza ianao. Aza manome tsiny ny hafa amin'ny tsy fahampian'ny fahaizanao mitsara. Tsy dia mitombona raha milaza ianao hoe mampiasa ny fampindramam-bola ho an'olontsotra noho ireo dokambarotra sy artista ireo.
Raha te-hanavaka ny mety sy ny tsy mety ianao, dia tokony hiresaka momba ireo dokambarotra hafa ihany koa. Ratsy ireo dokambarotra momba ny zava-pisotro, momba ny sigara, sy momba ny sakafo.
Bilaogera iray hafa no miresaka momba ny maha-kidaladala sy mampidi-doza an'ìreny dokambarotra ireny,
Isaky ny mijery fahitalavitra ireo tanora, mampiseho dokambarotra ilay fahitalavitra, izay ahitana zanaka lahy eo amin'ny latabatra fisakafoanana milaza fa hahaleo tena tsy hiankina amin'ny fianakaviany izy. Tezitra noho izany filazany izany, manontany ny dadany ka mamaly ilay zazalahy fa hahaleo tena izy noho ny fampindramam-bola natao ho an'olontsotra izy. Mandoka azy ireo ray aman-dreniny. Izao no ampianarin'izany: safidy tsara ny hahaleo tena eny fa na dia tsy maintsy hindram-bola aza.
Misy dokambarotra iray hafa maneho dokotera mangataka vola amina marary iray ao amin'ny trano fandidina. Valian'ilay marary izay manao tampimbava ho an'ny oksizena hoe mila mangataka fampindramam-bola any amin'ny orinasa mpampindram-bola izy. Maneho izany fa afaka mamaha ny karazana olana rehetra ny orinasa mpampindram-bola ho an'olontsotra
Lehilahy sy vehivavy tsara tarehy nipetraka sady mampisadiaka tongotra ary manao akanjo mangatsiatsiaka. Tsy dokambarotra momba ny fitafiana izany. Dokambarotra hambaboana ireo mpanjifa ilay izy, hoe raha mindram-bola ianao dia afaka ny ho toa azy ireo.
Ambanin'ny 0,1 isanjato ny olona tena voafatotry ny fisotroana sy fidorohana. Mifanohitra amin'izany, firy ny isan'ireo olona voaheloka ho faty ara-toekarena vokatry ny fampindramam-bola ho an'olontsotra? 4 tapitrisa. Noho io 0,1 isanjato io, voafehy tsara ny fisotroana sy fidorohana. Manao ahoana io fampindramam-bola ho n'olontsotra io izay miteraka fijaliana ho anà Koreanina mihoatra ny 10 isanjato? Tsy tokony ho raràntsika toy ny zava-mahadomelina sy ny sakafo tsy manjary ve io?